झापाका अधिकांश ठूला होटलमा अखाद्य वस्तु फेला, कुन होटल कस्ता ? « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
झापाका अधिकांश ठूला होटलमा अखाद्य वस्तु फेला, कुन होटल कस्ता ?
२ चैत्र २०७४, शुक्रबार ११:०२
झापा । बिर्तामोडमा सञ्चालित केही ठूला होटलले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको पाइएको छ । क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र होटल व्यवसायी संघ, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीसहितको टोलीले बुधबार र बिहीबार दुई दिन गरेको संयुक्त अनुगमनका क्रममा यस्तो पाइएको हो ।
प्रकाशित : २ चैत्र २०७४, शुक्रबार ११:०२